Olee otú ịchọta iPhone ndabere ebe na Hichapụ Backups
1. ndabere All iPhone Data
2. ndabere iPhone Data Otu na otu
2.1 ndabere iPhone Ndi ana-akpo
2.2 ndabere iPhone SMS
3. iPhone ndabere ebe
4. 11 Kasị-jụrụ Probs
Dị nnọọ ndabere gị iPhone na iTunes, ma enweghị echiche banyere ebe iPhone ndabere ọnọdụ bụ? N'ikpeazụ, ị na-ahụ ọnọdụ, ma amaghị otú ịgbanwe ya? Echegbula. Ọ bụ mfe aka ya. Isiokwu a na-enyere aka idozi niile nsogbu gị banyere iPhone ndabere ọnọdụ. Dị na-agụ na.
Part 1. Ebee iPhone ndabere ebe Part 2. Olee Gbanwee iPhone ndabere ebe Part 3. Gịnị mere Chọrọ Hichapụ iPhone ndabere si ebe Part 4. Olee iji Hichapụ Backups nke iPhone Part 5. Olee otú iji weghachi iPhone mgbe Ihichapụ Backups
Part 1. Ebee iPhone ndabere ebe
iTunes backups na-echekwara na mpaghara na kọmputa gị. Ha na-enịm ke aha njirimara / Library / Ngwa Nkwado / Mobilesync / ndabere (Lelee ebe dị iche maka nkwado ndabere na mpaghara dị iche iche OS ke okpokoro). Nanị ịnyagharịa ka mkpa nchekwa na gị Finder ngwa.
Onye ọ bụla na nchekwa n'okpuru ndabere e dere otu ndabere. The nchekwa nwere ike depụtaghachiri ma kwaga ebe ọ bụla na kọmputa, ọ dị mwute ikwu na-enweghị ihe kwesịrị ekwesị software, ọ gaghị ekwe omume gara tụtụkọta ọ bụla bara uru ọmụma site na ndị a faịlụ.
1. iTunes ndabere ọnọdụ dị iche iche Operating Systems
iTunes ndabere ebe
Mac OS ~ / Library / Ngwa Nkwado / MobileSync / ndabere /
(The "~" na-anọchi anya Home nchekwa. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ Library n'ụlọ gị nchekwa, jide Option na pịa Go menu.
Windows XP \_ Documents na Mwube \_ (aha njirimara) \_ Ngwa Data \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ ndabere \_
(Iji ngwa ngwa ịnweta Ngwa Data nchekwa, pịa Malite, ma họrọ Run. Pịnye AppData na pịa OK.)
Windows Vista \_ Ọrụ \_ (aha njirimara) \_ AppData \_ agagharị \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ ndabere \_
(N'ihi na ịnweta ngwa ngwa iji AppData nchekwa, pịa Malite. Na search mmanya, ụdị AppData na pịa Return.)
Windows 7 \_ Ọrụ \_ (aha njirimara) \_ AppData \_ agagharị \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ ndabere \_
Windows 8 \_ Ọrụ \_ (aha njirimara) \_ AppData \_ agagharị \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ ndabere \_ (N'ihi na ịnweta ngwa ngwa iji AppData nchekwa, pịa Malite. Na search mmanya, ụdị AppData na pịa Return)
Cheta na: N'ihi na Windows ọrụ: Ngwa Data na AppData directories na ọdịnaya n'okpuru ha na-ezo. Ọ pụtara na i kwesịrị inwe ike 'Gosi zoro ezo faịlụ' n'ime Windows Explorer tupu-ele faịlụ.
2. iCloud ndabere ebe
Na gị iPhone, họrọ ettings> iCloud, mgbe ahụ enweta Nchekwa & ndabere.
Na Mac, na-aga Apple menu> System Mmasị, pịa iCloud, wee pịa Jikwaa.
Gị Windows kọmputa: Windows 8.1: Gaa na Malite na ihuenyo na pịa ala akụ na ala-akaekpe. Pịa iCloud ngwa, wee pịa Jikwaa.
Windows 8: Gaa na Malite ihuenyo na pịa iCloud tile, wee pịa Jikwaa. Windows 7: Họrọ Malite menu> All Mmemme> iCloud> iCloud, wee pịa Jikwaa.
Part 2. Olee Gbanwee iPhone ndabere ebe
Gị disk C-agba fọrọ nke nta nke ohere, otú ị chọrọ ịgbanwe iPhone ndabere ọnọdụ maka ebe ọzọ ka onwe elu disk C? Na-ahọrọ na-echekwa gị mkpa data, dị ka iPhone backups na SSD, ọ bụghị Disk C? N'agbanyeghị ihe kpatara ya bụ, ebe a bụ ụzọ ị nwere ike ịgbanwe iPhone ndabere ọnọdụ.
Cheta na: Ebe a, m elekwasị anya na mgbanwe iTunes ndabere na ọnọdụ na a Windows kọmputa. Dị ka iCloud ndabere, ọ na-echekwa na Apple nkesa. Ị nwere ike ịgbanwe iCloud akaụntụ ma ọ bụrụ na-amasị gị. Dị pịa Ntọala> iCloud> Akaụntụ na gị iPhone. Na-apụ gị iCloud akaụntụ na abanye n'ime ọzọ.
Soro nzọụkwụ n'okpuru.
1. Ke Windows 8/7 / Vista
Nzọụkwụ 1. Nso iTunes.
Nzọụkwụ 2. Navigate na nchekwa ebe gị iPhone backups bụ. Detuo ha niile ndabere faịlụ na mado ha ka ha ọ bụla na nchekwa ị chọrọ ịzọpụta iPhone backups. Ihe atụ, ị nwere ike ịzọpụta iPhone backups on Disk E: \_ iPhone ndabere.
Nzọụkwụ 3. Gaa na ala n'akụkụ aka ekpe na pịa Malite. Na search igbe, tinye cmd.exe. The cmd.exe omume na-egosi elu. Right pịa ya ma họrọ agba ọsọ dị ka nchịkwa.
Nzọụkwụ 4. Na mmapụta iwu ozugbo, tinye a ọchịagha: mklink / J "C: \_ Ọrụ \_ (aha njirimara) \_ AppData \_ agagharị \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ ndabere" "D: \_ temp \_ ndabere".
Nzọụkwụ 5. Mgbe ahụ, na-agbalị akwado gị iPhone na iTunes na ego ma nkwado ndabere na mpaghara faịlụ a ga-azọpụta gị chọrọ nchekwa.
2. Ke Windows XP
Nzọụkwụ 1. Hụ iTunes na-adịghị na-agba ọsọ.
Nzọụkwụ 2. Download ma wepụ nkwụsị ịba uru na kọmputa.
Nzọụkwụ 3. unzip Junction.exe ka aha njirimara gị nchekwa, nke bụ na-hụrụ na C: \_ Documents na Mwube \_.
Nzọụkwụ 4. Gaa na nkwado ndabere na mpaghara iTunes ọnọdụ nchekwa na-akpali ndabere faịlụ ọzọ nchekwa, dị ka G: \_ iTunes ndabere.
Nzọụkwụ 5. Pịa Windows + R. Mgbe dialog abịa si, ụdị cmd.exe na pịa OK.
Nzọụkwụ 6. Ke iwu ozugbo, ịmepụta otu NTFS nkwụsị mgbe, ihe atụ.
Cd Desktọpụ nkwụsị "C: \_ Documents na Mwube \_ (aha njirimara) \_ Ngwa Data \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ ndabere" "G: \_ iTunes ndabere"
Nzọụkwụ 7. Ugbu a, ndabere ihe iPhone ndabere na iTunes na ego ma nkwado ndabere na mpaghara faịlụ a ga-azọpụta na ọhụrụ nchekwa ndekọ.
Nzọụkwụ 2. Gaa ~ / Library / Ngwa Nkwado / MobileSync / ndabere /. Detuo niile ndabere faịlụ gị chọrọ mbanye, dị ka Mpụga.
Nzọụkwụ 3. Launch enweghị Ngwọta (emi odude ke Ngwa / Utilities / enweghị Ngwọta) na-emeghe a iwu ozugbo. Mepụta a atụ njikọ site na iji iwu yiri onye n'okpuru,
ln -s / mpịakọta / mpụga / ndabere / ~ / Library / Ngwa \_ Nkwado / MobileSync / ndabere
Nzọụkwụ 4. Iji iTunes nkwado ndabere na mpaghara gị iPhone. Mgbe ahụ, na-aga ọhụrụ ndabere nchekwa ịhụ ma ndị ndabere faịlụ enwere ma ọ bụ.
Part 3. Gịnị mere Chọrọ Hichapụ iPhone ndabere si ebe
Mgbe abịa ihichapụ iPhone ndabere, ị nwere ọtụtụ ihe mere maka ya. Ebe a, m depụta si ụfọdụ n'ime ha.
Ihe banyere ihe mere ihichapụ iTunes backups
1. inwe mgbagwoju anya oge ọ bụla ị họrọ a ndabere faịlụ site a otutu.
2. iri puku faịlụ nọ gị iPhone ndabere ebe, ọtụtụ na ndị agadi na ụbọchị si aga backups. Chọrọ ka ihichapụ ha ka ha onwe elu ohere nke gị na kọmputa.
3. iTunes apụghị ndabere iPhone "iPhoneName" n'ihi na nkwado ndabere na mpaghara bụ ihe rụrụ arụ ma ọ bụ na dakọtara na iPhone. Chọrọ ka ihichapụ nkwado ndabere na mpaghara n'ihi na nke a iPhone, ahụ na-agbalị ọzọ.
4. apụghị ndabere gị iPhone, n'ihi na ọ na-ekwu na ị nwere ka ihichapụ ochie ndabere mbụ.
5. Get ọhụrụ iPhone, ma na-ahụ ya bụ ekwekọghị na ochie iTunes backups.
6. The ndabere ada ada na ọ na-agwa gị ka ihichapụ ndabere.
Ihe banyere ihe mere ihichapụ iCloud backups maka iPhone
1. iCloud ndabere ebe nchekwa bụ fọrọ nke nta zuru na ike ndabere gị iPhone. N'ihi ya, i nwere ka ihichapụ ochie backups maka ọhụrụ otu.
2. Kpebie ka ihichapụ iPhone ndabere si iCloud n'ihi na ọ nwere rụrụ arụ faịlụ.
3. nso nso kwalite ka ọhụrụ iPhone, na kwado gị ochie otu elu na nyeghachi ya ọhụrụ. Ugbu a, ị na-na-Ịma Ọkwa na ị na-agba ọsọ nke nchekwa iCloud.
Nkebi nke 4: Hichapụ iPhone ndabere
1. Hichapụ iTunes ndabere File
Ihichapụ a ndabere bụ nnọọ dị mfe dị ka eke otu na otu isịneke, ọ gaghị ekwe omume ka ihichapụ a ndabere kpọmkwem site iTunes. Ka ihichapụ ndabere mkpa ka ị ịnyagharịa azụ ebe ha na-emi odude ke filesystem (aha njirimara / n'ọbá akwụkwọ / Ngwa Nkwado / Mobilesync / Backups).
Mgbe ahụ, nri pịa nkwado ndabere na mpaghara na ị chọrọ ka ihichapụ na pịa Ịkwaga Mkpofu. Oge ọzọ na ị efu gị ahịhịa, nkwado ndabere na mpaghara a ga-ruo mgbe ebighị ebi.
Iji Mepee iTunes Mmasị: Windows: Họrọ Dezie> Mmasị Mac: Họrọ iTunes> Mmasị
Cheta na: Mgbe ị hichapụ ihe niile gị dị ọmụma niile nke gị ọmụma ga-efu !!!
2. Nhichapụ iCloud ndabere File
Ihichapụ otu iCloud ndabere bụ nnọọ mfe karịa ihichapụ onye na-na a na-ahụ na kọmputa!
Nzọụkwụ 1. Ị mkpa na-emeghe Ntọala na gị iPhone na pịa na iCloud nhọrọ.
Nzọụkwụ 2. Kpatụ Nchekwa & ndabere nhọrọ.
Nzọụkwụ 3. enweta na Jikwaa Nchekwa wee họrọ a ndabere
N'ikpeazụ, enweta na Nhichapụ ndabere na ị iCloud ndabere kwesịrị ihichapu onwe ya.
Part 5. Olee otú iji weghachi iPhone mgbe Ihichapụ Backups
Chọrọ iji naghachi gị iPhone, dị mwute ikwu na ị dị nnọọ chọta nkwado ndabere na mpaghara faịlụ i mere ugbua e-ehichapụ? Echegbula. Ebe a bụ ụzọ ziri ezi n'ihi na ị iweghachi gị iPhone. Wondershare Dr.Fone Maka iOS (Win) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac)-enyere gị aka weghachi ehichapụ faịlụ site iPhone effortlessly.
Naghachi ehichapụ kọntaktị, ndetu, SMS, na-echetara, kalenda, WhatsApp akụkọ ihe mere eme, wdg si iPhone.
Weghachite iPhone backups si iTunes ma ọ bụ iCloud na chekwaa faịlụ na kọmputa.
N'ihe ize ndụ-free na nchebe, na ọ dịghị data mebiri.
Arụ ọrụ nke ọma na iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5c / 5 / 3GS / 4 / 4G / 3G.
Weghachi iPhone si iTunes / iCloud
10 Ọtụtụ-jụrụ Nsogbu banyere iPhone Update
Ụzọ abụọ imelite iPhone Mfe
Kasị-jụrụ Nsogbu banyere Iweghachi iPhone
Jailbreak iPhone 4S agba ọsọ iOS 7
Atụmatụ na usoro on syncing iPhone
Best 17 iPhone ngwa ọdịnala n'ihi Ị
Ibufee ọdịnaya site na iPhone ka Android
Nyefee Music si iPhone ka Computer
Nyefee ngwa site iPhone ka iTunes
Olee otú Kọwaa Nchọgharị History na kuki na iPhone
Nzọụkwụ na Downgrade si iOS 8 ka iOS 7
Ịnweta iPhone ndabere: 4 Nzọụkwụ na Access iPhone ndabere Data na Dr.Fone
Weghara ma Record your iPhone ihuenyo
Full Guide to Hichapụ ihe iPhone
Full Solutions ka iPhone Keyboard Nsogbu
Olee otú Idozi iPhone N'ikuku Nsogbu
Nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka iPad Easily na nanị
Chọta ebe Service on iPhone
Olee otú undelete iPhone Email
Olee otú Bipute Ndi ana-akpo si iPhone ma ọ bụ iTunes ndabere
> Resource> iPhone> Olee otú iji Chọta iPhone ndabere ebe na Hichapụ Backups